Si loo taageero bulshada deegaanka oo si firfircoon uga qaybqaato waxqabadka tabaruca ee Ururka Laanqayrta Cas ee Gobolka Hunan | Micomme
Si loo taageero bulshada deegaanka oo si firfircoon uga qaybqaato waxqabadka tabaruca Ururka Laanqayrta Cas ee Gobolka Hunan
To Taageer bulshada deegaanka oo si firfircoon uga qaybqaata waxqabadka tabaruca Ururka Laanqayrta Cas ee Gobolka Hunan
Micomme waxay cagta saartay magaalada Hunan waxayna aaday adduunka. Intii lagu gudajiray kobcinta shirkada, waxay heshay daryeelka hogaamiyaasha iyo khabiirada dhamaan heerarka. Si loo sii caawiyo hay'adaha caafimaadka ee Gobolka Hunan si ay ula dagaallamaan COVID-19, Micomme waxay go'aansatay inay iskaashi la sameyso Isbitaalada Degmooyinka Hunan iyada oo loo marayo iskaashiga Ururka Laanqayrta Cas ee Hunan. Guud ahaan 80 hawo-mareennada hawada ku-takhasusay oo aan caadi ahayn iyo aaladda daweynta sanka-weyn ee aaladaha daaweynta daaweynta ayaa lagu deeqay, iyadoo qiimaha suuqa uu yahay 6.2 milyan yuan. Qeybtan qalab caafimaad waxay ku saabsantahay inay la dagaallanto COVID-19, oo ka caawineysa Gobolka Hunan guushii ugu dambeysay ee ka dhanka ah COVID-19. Dufcaddii labaad ee qalab caafimaad ayaa u baxday Wuhan bishii Maarso 10, 2020 markii ay ahayd 3:00 aroornimo. Gaadiidka qaada ee Micomme ayaa si toos ah ugu tegay Wuhan iyaga oo wata aaladaha daaweynta neefsashada 101. Qalabkan 101-ka ah waxaa ka mid ah 90-qulqul qulqulka sare ee aaladaha daaweynta daweynta sanka-ka iyo 11 hawo-mareen aan firfircoonayn. Gaariga ayaa yimid Cusbitaalka Wuhan huoshenshan 8-dii aroornimo.
Soosaarayaasha hawada ee Shiinaha ayaa kor u qaadaya wax soo saarka si ay ugu fidiyaan sahayda dalal kale sida dalabaadka ka yimaada qulqulka dibedda ee xilligii aafada COVID-19.
Ventilator, oo ah qalabka caawiya neefsashada, ayaa hadda ah tan ugu baahida badan iyada oo ay weheliso maaskaro dawooyin ah, suuxdooyin ilaalin ah iyo ookiyaalayaal iyada oo ay jiraan dadaallada xakameynta faafa ee adduunka.
Qiyaastii 880,000 oo hawo-qaadayaal ayaa ku baahsan adduunka iyada oo ay jiraan masiibada, iyadoo Mareykanka uu u baahan yahay 75,000 oo hawo-mareenno ah, halka Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Isbaanishka iyo Ingiriiska ay wadaagaan 74,000, sida ay sheegtay GlobalData, oo ah shirkadda xog-ururinta iyo falanqaynta. Soosaarayaasha hawada ee Shiinaha ayaa hadda shaqeynaya saacad kasta si ay taageero ugu siiyaan waddamada kale ee si degdeg ah ugu baahan hawo-mareenada iyaga oo hubinaya sahayda guriga.
Micomme, oo ah soo-saareyaasha qalabka caafimaadka ee neef-mareenka ee Changsha, ayaa sheegtay inay amarro ka heshay illaa 52 dal iyo gobollada ayna gaarsiisay inka badan 1000 hawo-mareenada. Jadwalka shaqada ee amarrada ganacsiga ee la saxeexay ayaa loo habeeyey illaa xagaaga dambe. Tani waa isku mid dhammaan shirkadaha kale.
Micomme waxay sheegtay inay u dirtay Talyaaniga 30 hawo oo hawo diyaaradeed kana yimid shirkadda loo yaqaan Changsha bishii Maarso 21-keedii. Waxay sidoo kale 250 hawo-mareeno u rartay Serbia.